Soomaaliya iyo Ethiopia oo iskaashigii ugu balaarnaa ka samaynaya dhinaca maalgashiga. | Somali National Television - sntv.so
Home DHAQAALAHA Soomaaliya iyo Ethiopia oo iskaashigii ugu balaarnaa ka samaynaya dhinaca maalgashiga.
Soomaaliya iyo Ethiopia oo iskaashigii ugu balaarnaa ka samaynaya dhinaca maalgashiga.
Muqdisho:- Waxay ahayd booqasho gaaban balse xambaarsan guulo wax ku ool, waxaana madaxda labada wadan ay ay fureen baal cusub, marka la eego miisaanka qodobada heshiiska ay wada ee ku aadan, amniga, dhaqaalaha iyo siyaasabada oo taabanaya masiirka labada shacab.
Cabshuur badan ayay ku bixsaa Dekadaha dalalka dariska la ah ee ay wax uga soo dagaan, ama ay ka dhoofiso bunka ay caanka ku tahay iyo badeecadaha kale, iyadoo ay u sii dheertahay masaafada fog ee dekadaha.
95% waxay isticmaashaa Dekadda Jabuti, balse laguma sii tiirsanaan karo hal il oo kaliya, taas ayaana qodobka ugu wayn heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhigtay in la maalgaliyo 4-Dekadood oo Soomaaliya ku yaal.
Soomaaliya oo ah dal gees ilaa ka gees bada ku teedsa, islamarkaana samaynaya soobasho amni iyo mid dhaqaale waxaa ka furan fursado maalgashi oo isha lagu wada hayo, balse hadda Ethiopia ayaa ku dhiiraysa inay ka faa’iidaysato.
Sidoo kale Sudan ayay la dhisaysaa Dekad cusub oo ay Ethiopia saami ku yeelanayso, balse Dekadaha Soomaaliya waxay noqon kartaan dariiq ka dhaw.
Fulinta qodobada heshiiska oo ah halka isha lagu wada hayo waxaa loo saaray gudi isku dhaf ah oo heer wasiir ah, taas oo micneheedu yahay ka g’naashaha labada wadan gaaritaanka mustaqbal wanaagsan iyo iskaashi.
W/Q: Maxamuud Cabdi Diirshe
Previous articleKhudbadda Farmaajo “Fadlan ii ogolow in aan halkan uga mahad celiyo ciidamadiina milatariga ee la shaqeeya AMISOM”
Next articleHay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda oo xafiis cusub ka furatay Buula-burde